Coronavirus: Ma u oggolaaneysaa carruurtaada inay la cayaaraan carruurta kale? |
Iyadoo iskuullo badan la xiray qeybo ka mid ah dunida, ayaa waaliddiintu waxay is weydiinayaan waxa carruurtoodu ay tahay inay sameeyaan iyo waxa ay ka fogaan lahaayeen. Carruurtaadu ma u bixi karaan bannaanka si ay saaxiibbadood ula cayaaraan? Mise xiritaanka iskuuullada wuxuu ka dhigan yahay inay dhammaatay xilligoodii cayaarta?
Haddii Katherine Wilson ay beddeli karto wixii tegay, waxay sheegtay inuusan qoyskeeda waqti casho ku qaadan lahayn guriga deriskooda.
Labo toddobaad kahor, markii uu Covid-19 ku faafay Talyaaniga balse aysan weli dowladdu amar ku bixin inay dadku guryahooda joogaan, hooyadan dhashay labada carruurta ah kuna nool magaalada Rome ayaa iyada iyo labo qoys oo kale waxaa loo sameeyay casuumaad casho.
“Seygeyga iyo aniga waxaanu iska dhaadhicinnay inaan guri joogno oo casuumaaddu aysan ahayn isu imaatin weyn,” ayay u sheegtay BBC-da.
Xilligaas Katherine, oo ah qoraa Mareykanka u dhalatay seygeeduna uu Talyaaniga u dhashay, ayaa sheegtay in iyada iyo hooyooyin kale oo badan ay xiritaanka iskuulka u arkayeen feesto.
“Waxaanu is lahayn: ‘Tani waa wax cajiib ah, waa sida feesto yar, aynu aadno meelaha aynaan weligeen tegin .'”
Balse markii ay runta ogaatay oo ay xaqiiqsatay sida uu fayrasku u saameeyay dalkaas, waxay jeclaan lahayn inay taxadar weyn muujiso oo ay xaddido dhaqdhaqaaqa qoyskeeda.
Maalmo yar kadib, dowladda Talyaaniga ayaa soo rogtay xayiraado. Taasi micnaheedu waa inaan la aadi karin meelaha loo dalxiis tago.
“Marka la eego xayiraaddu way fiican tahay intii aad qaadan lahayd go’aan ay kugu cadaadiyeen carruurtaada amaba saaxiibbadaa,” ayay tiri.
Qeybo badan oo dunida ah, waaliddiin badan ayaa sida Katherine ku wareersan shuruucda ay carruurtooda u dejin lahaayeen si ay usoo cayaaraan.
Markii dhinac laga eego, dowladuhu ma xayirayaan dhaqdhaqaaqa dadka. Balse dhanka kale, saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in laga fogaado isu imaatinnada ay muhiim u tahay joojinta faafitaanka fayraska.
Dr Keri Althoff, oo wax ka dhigta Iskuulka Caafimaadka Bulshada ee Johns Hopkins Bloomberg ee ku yaalla Baltimore, Maryland, ayaa sheegtay in kala fogaanshaha ay micnaheedu tahay in carruur iyo dad waaweynba ay isu jirsadaan labo mitir mar walba. Taas waxay ka dhigan tahay inaan la cayaari karin kubadda gacanta iyo tan cagta.
Inkastoo ay jiraan cayaaro aan saameyn weyn lahayn sida teeniska oo ay carruurtu si wadajir ah u dheeli karaan, haddana way adag tahay in carruurta lagu amro inay is ilaaliyaan xilliga cayaarta.
“Cidna makala fogaato goobaha cayaarta-taasi ma aha muhiimadda goobta cayaarta,” ayay tiri Dr Althoff.
Waxay intaa ku dartay in cudurku uu maalmo ku noolaan karo derbiyada, sidaas darteed ay muhiim tahay in laga fogaado meelaha lagu cayaaro iyo qalabka cayaaraha.
Inkastoo carruurta ay caadi ahaan aad uga muuqan calaamadaha coronavirus, haddana dadka kale ayay u gudbin karaan.
Taasi micnaheedu waa in canuggaaga iyo saaxiibkiis iyagoo u muuqda ina gebi ahaanba caafimaad qabaan, ay haddana cudurka u gudbin karaan dadka kale, sida dadka waaweyn oo ay ka muuqan karaan calaamado waaweyn.
“Waaliddiintu waa inay haatan ka taxadaraan naftooda,” ayay tiri Ms Althoff.
Dowladaha hoose ayaa u baahan inay caddeeyaan waxa loola jeedo kala fogaanshaha bulshada, ayay tiri Dr Katherine Semrau, oo ka tirsan sheybaarka AriadneLabs.
Waxay Katherine sheegtay in xitaa haddii aan xayiraad la saarin bulshada sida dalka Talyaaniga, ay haatan tahay xilligii ay dadku is xilqaami lahaayeen iskana taxadari lahaayeen.
Ms Althoff ayaa intaas ku dartay in waaliddiintu ay tahay inay xayiraado soo rogaan, ayna carruurtooda u sameeyaan qorshe.
Sida aad isku ilaalin lahayd adigoo ku qanacsan
•Raac talooyinka waaxda caafimaadka bulshada ee ku aaddan waxyaabaha la oggol yahay in la sameeyo.
•Ka fogow meelaha lagu cayaaro ee goobaha kale sida meelaha lagu keydiyo qalabka carruurta.
•Bannaanka aad! Soco oo kaxee baaskiil
•Kala xiriir saaxiibbadaa iyo qoyskaaga internet-ka.